Chiller egxothiwe ngqo
Ukutshisa ngokuthe ngqo i-lithium bromide chiller / heater luhlobo lweyunithi enkulu yeshishini yokufudumeza okanye ukupholisa, kusetyenziswa igesi (irhasi yendalo, igesi yedolophu, okanye i-LPG) okanye ioyile (ioyile yedizili) njengamandla okuqhuba (ngombane umda kuphela njengamandla ancedisayo), isisombululo se-lithium bromide njengesifunxi kunye namanzi njengesiqandisi.
I-chiller esebenza nge-steam
I-steam esebenzayo i-lithium bromide yokutsalwa kwe-chiller luhlobo lweyunithi enkulu yeshishini elinomphunga njengamandla okuqhuba, isisombululo se-lithium bromide njengesifunxi kunye namanzi njengesiqandisi.
Amanzi ashushu ashushu asebenza chiller
Amanzi ashushu ashushu asebenza ngokufunxa amanzi chiller luhlobo lweyunithi enkulu yobukhulu bemizi-mveliso okanye yorhwebo ngamanzi ashushu njengamandla okuqhuba, isisombululo se-lithium bromide njengesifunxi kunye namanzi njengesiqandisi. Kuxhomekeke kubushushu bamanzi ashushu, Shuangliang ukubonelela uluhlu olupheleleyo iinketho chiller isiphumo kabini, inqanaba elinye chiller amanzi ashushu, isigaba ezimbini amanzi chiller ashushu, chiller ashushu amanzi chiller, ezimbini lift chiller amanzi ashushu ukulungiselela iimfuno zabaxhasi ezahlukeneyo kunye neemeko zokusebenza ezahlukeneyo.
I-Flue esebenzayo ye-chiller
Iglue flue eqhutywa yiLithium Bromide yokutsala chiller / isixhobo sokufudumeza luhlobo lwezixhobo zokonga umbane, ezihlala zisetyenziselwa ukubuyisa ubushushu benkunkuma obuqulathwe kubushushu obuphezulu begesi (njengokukhupha irhasi kwiinjini, iiturbine okanye esinye isixhobo somlilo), kunye nokuvelisa ubushushu obuphantsi bamanzi abandayo kunye / okanye amaqondo obushushu aphezulu amanzi ashushu njengezinto eziluncedo ezixabisekileyo.
Impompo yobushushu yokufunxa i-lithium bromide yimpompo yobushushu engaqhutywa ngumbane oqhelekileyo, kodwa yimithombo yobushushu eyahlukeneyo enje ngegesi yendalo, umphunga, irhasi yelaphu, amanzi ashushu afudumeleyo, ngokusekwe kwitekhnoloji yokufunxa. Impompo yobushushu yokufunxa inokuvelisa ubushushu obuphezulu (ubushushu obuphakathi kunye nobushushu obuphezulu bamanzi ashushu) ngokubuyisa ubushushu kwimithombo yobushushu obukwiqondo eliphantsi (njengamanzi okupholisa, amanzi aphuma kubushushu bamanzi, amanzi asuka kubushushu bomoya wegesi, inkunkuma yamanzi evela kwimizi-mveliso, njl.). Amanzi ashushu avelisiweyo anokusetyenziselwa iinkqubo ezahlukeneyo zeshishini kunye nokufudumeza ukufudumeza, ukufudumeza isithili. Ngokubanzi, iimpompo zokufudumeza i-lithium bromide zinokuhlelwa ngokweendidi ezimbini. Uhlobo loku-1 lokumpompoza lobushushu luyakwazi ukubuyisa ubushushu kumthombo wobushushu obuphantsi, kunye nokuvelisa ubushushu bamanzi ashushu ukusuka kwi-40 ~ 100 ° C. Uhlobo lwe-2 lokumpompoza ubushushu luyakwazi ukubuyisa ubushushu kumthombo wobushushu obuphakathi, kunye nokuvelisa ubushushu bamanzi ashushu ashushu ukusuka kwi-100 ~ 170 ° C.
Uthotho lweMagnetic Bearing Centrifugal Chiller
Ukusebenza okuphezulu kweMagnetic Bearing Centrifugal Inverter Chiller, enezixhobo eziphambili ze-centrifugal inverter compressor, i-IPLV ukuhlangabezana ne-10 okanye ngaphezulu, i-40% -50% yokusetyenziswa kwamandla kancinci xa kuthelekiswa nesikere okanye i-chilr centugal.
Uhlobo olupholileyo lwamanzi olupholileyo lwamanzi
Faka isicelo sokusebenza okuphezulu kwe-semi-hermetic inqanaba le-centrifugal compressor, amaza amisiweyo okanye ulawulo lwe-inverter, IPLV yamanzi apholileyo inverter centrifugal chiller iyahlangabezana neemfuno zeBanga loku-1 leMigangatho yamandla eTshayina. Obona bushushu buphezulu beCentrifugal Uhlobo lwaManzi Ubushushu Pump, iModeli yoBushushu obuPhezulu be ingangama-72 ℃.
I-cooled screw chiller yamanzi, yamkela ukusebenza kakuhle kwe-hermetic twin screw compressor, ukusisigxina okanye ukulawula i-inverter, i-IPLV ye-inverter epholileyo yamanzi e-screw chiller ihlangabezana neemfuno zeBakala 1 ze-Energy Standard e-China. Elonaqondo lobushushu liphezulu lendawo yokufuma yoMpompo waManzi Ubushushu Pump, iModeli yoBushushu obuPhezulu inokuba ngama-82 ℃.